Izindaba - Yini ama-Stick Electrode?
Ama-electrode wokushisela yizintambo zensimbi ezibhakwe kuzingubo zamakhemikhali. Induku isetshenziselwa ukuqinisa i-arc ye-welding nokuhlinzeka ngensimbi yokugcwalisa edingekayo ukuze ilunga lishiselwe. Ukumbozwa kuvikela insimbi ekulimaleni, kuqinise i-arc, futhi kuthuthukise i-weld. Ububanzi bocingo, kunciphisa ukumboza, kunquma ubukhulu benduku yokushisela. Lokhu kuvezwa ngezingxenyana ze-intshi ezifana no-3/32 ″, 1/8 ″, noma u-5/32. ” Ubuncane bobubanzi kusho ukuthi budinga okuncane njengamanje futhi bufaka inani elincane lensimbi lokugcwalisa.
Uhlobo lwensimbi yensimbi olushiselwe, inqubo yokushisela nomshini, nezinye izimo kunquma uhlobo lwe-electrode ye-welding esetshenzisiwe. Isibonelo, ikhabhoni ephansi noma "insimbi emnene" idinga induku yokushisela yensimbi emnene. Ukushisela insimbi, i-aluminium noma ithusi kudinga izinduku zokushisela ezihlukile nemishini.
Ukumboza okuguqukayo kuma-electrode kunquma ukuthi kuzosebenza kanjani ngesikhathi senqubo yangempela yokushisela. Okunye okokumboza kuyasha futhi ukucucuza okushisiwe kwakha intuthu futhi kusebenza njengesihlangu esizungeze “ichibi” lokushisela, ukuze kulivikele kulowo moya ozungezile. Ingxenye yokugeleza iyancibilika futhi ihlangane nocingo bese ihambisa ukungcola phezulu. Lokhu kungcola kwaziwa njenge- “slag.” I-weld eqediwe ingaba brittle futhi ibuthakathaka uma kungenjalo ngokugeleza. Lapho amalunga ashiselwe esehlile, i-slag ingasuswa. Kusetshenziswa ibhulashi lesando kanye nebhulashi locingo ukuhlanza nokuhlola i-weld.
Ama-electrode welding e-metal-arc angaqoqwa njengama-electrode angenalutho, ama-electrode afakwe ukukhanya, kanye ne-arc evikelwe noma ama-electrode asindayo. Uhlobo olusetshenzisiwe luxhomeke kuzakhiwo ezithile ezidingekayo ezibandakanya: ukumelana nokugqwala, i-ductility, amandla aqine kakhulu, uhlobo lwensimbi eyisisekelo ezofakwa nge-welding; kanye nendawo ye-weld eyicaba, evundlile, emile, noma ngaphezulu.